दक्षिण एसियाका भ्रमण वर्ष र नेपाल - Karobar National Economic Daily
दक्षिण एसियाका भ्रमण वर्ष र नेपाल
query_builderAugust 25, 2017 10:42 AM supervisor_accountप्रा.डा. हरि शर्मा visibility5672
हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, दक्षिण–पूर्वी एसियामा दिगो पर्यटनका निम्ति कहलिएको मुलुक थाइल्यान्ड हो । सन् १९६० देखि थाइल्यान्ड अनवरत पर्यटन प्रवद्र्धनमा लागिपरेको छ ।
पहिले टुरिस्ट अर्गनाइजेसन, सन् १९६३ देखि टुरिस्ट अर्गनाइजेसन अफ थाइल्यान्ड र सन् १९७९ देखि टुरिज्म अथोरिटी अफ थाइल्यान्डका रूपमा हालसम्म थाइल्यान्डले लगभग विश्वका २५–३० वटा देशमा आफ्नो पर्यटन प्रवद्र्धनका कामहरू गरिरहेको छ ।
सन् १९६० मा थाइल्यान्ड भ्रमणमा आउने पर्यटकको संख्या ८१ हजार मात्र थियो भने आज ५६ वर्षपछि सन् २०१६ मा त्यहाँ आउने पर्यटकको संख्या ३ करोड २५ लाख ९ सय पुगेको छ । हामीकहाँ सन् १९७५ देखि मात्र सरकारले पर्यटनलाई संस्थागत रूपमा विस्तार गर्ने नीति लिएकाले र पर्यटन प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रले मात्रै आफ्नो प्रयासको लगानी गरेकाले पर्यटन क्षेत्रमा अभैm पनि दिगो विकासका लागि कुनै महŒवपूर्ण कोसेढुंगा स्थापित गर्न सकेका छैनौं ।
सन् १९९८ लाई नेपाल सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा ग-यो र त्यसै वर्षदेखि नेपालको पर्यटनले एउटा सही मार्गदर्शन पाउन थालेको हो । नेपाल भ्रमण वर्ष १९९८ सकिएलगत्तै नेपाल सरकारले सरकारी तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त सहभागितामा सञ्चालन हुने गरी नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना गरेको हो । त्यसपछि मात्र नेपालको बाह्य पर्यटन र आन्तरिक पर्यटनले काँचुली फेरेको हामी देख्छौं ।
पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि भ्रमण वर्ष मनाउने परम्परा थाइल्यान्डले सर्वप्रथम सुरु गरेको हो । सन् १९८० र सन् १९८७ मा थाइल्यान्डले भ्रमण वर्ष मनायो । सन् १९८० मा थाइल्यान्ड भ्रमणमा आउने पर्यटकको संख्या २० लाख रहेको देखिन्छ र त्यसबाट थाइल्यान्डले पर्यटन उद्योगलाई मुलुकको सबैभन्दा बढी वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोतका रूपमा पहिचान ग-यो ।
थाइल्यान्डको पर्यटनको सफलताको यो पहिलो कडी थियो । हामीले नेपाल भ्रमण वर्ष १९९८ मनाउँदा मुलुक द्वन्द्वको स्थितिबाट गुज्रिरहेको थियो तापनि यस अभियानले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा कसिलो हुन बल पु-याएको अनुभव त्यस राष्ट्रिय अभियानका कार्यक्रम संयोजकका नाताले मैले गरेको छु ।
सन् १९८७ मा थाइल्यान्डले दोस्रो चोटि भिजिट थाइल्यान्ड वर्ष मनाउँदा पर्यटक आगमन संख्यामा २४ प्रतिशत वृद्धि भई ३० लाख ४० हजार पर्यटक पुगेका थिए । नेपालले सन् १९९८ मा नेपाल भ्रमण वर्ष (भिजिट नेपाल इयर) अभियानलाई अघि बढाइरहँदा थाइल्यान्डले एमेजिङ थाइल्यान्ड (आश्चर्यजनक थाइल्यान्ड) अभियान चलाएको थियो । स्मरण रहोस्, थाइल्यान्डले आफ्नो पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि जे–जति खर्च गर्छ त्यो सरकारी कोषबाट गर्छ, तर नेपाल भ्रमण वर्ष–१९९८ मा राष्ट्रको कोषबाट प्रवद्र्धनमा हामीले केवल २० लाख रुपैयाँ खर्च ग-यौं होला । अन्य खर्चको हकमा दुई जना दक्ष जनशक्तिको तलब सुविधा संयुक्त राष्ट्र विकास कोष (यूएनडीपी) ले बेहोरिदिएको थियो ।
थाइल्यान्ड सरकारले मुलुकभित्रकै पर्यटन सम्बद्ध निजी क्षेत्रका संघ–संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै सन् २००३ मा पुनः अनसिन थाइल्यान्ड (नदेखेको थाइल्यान्ड) अभियान चाल्यो । तर, त्यहाँ त्यसबखत सार्स संक्रमण पैmलिएका कारण पर्यटक आगमन नबढेर १ करोडमै स्थिर रह्यो । सन् २००६ मा थाई सरकारले फेरि थाइल्यान्ड ग्रान्ड एन्भिटेसन अभियान अघि सा-यो ।
त्यसरी नै विभिन्न नाम दिँदै सन् २००७ र सन् २०१० पनि पर्यटन प्रवद्र्धनमा सरकार केन्द्रित रह्यो । सन् २०१२ मा थाइल्यान्डको पर्यटक आगमन संख्या २ करोड २० लाख पुगिसकेको थियो । सन् २०१३–१४–१५ तथा २०१६ र २०१७ पनि पर्यटनका लागि समर्पित गर्दै थाई जनताले आज त्यसबाट प्राप्त हुने आर्थिक सुसम्पन्नता उपभोग गरिरहेका छन् ।
मलेसियाले पनि प्रत्येक सात वर्षमा भिजिट मलेसिया इयर (भीएमवाई) मनाउने गर्दछ । सन् १९९० मा मलेसियाले आफ्नो पर्यटन प्रवद्र्धन अभियान सुरु गरेको हो । त्यस वर्ष मलेसिया आउने पर्यटकको संख्या अघिल्लो वर्षको ४० लाख ८० हजारबाट बढेर ७० लाख ४० हजार पुगेको थियो । सन् १९९० को सफलताले उत्साहित भई चार वर्षपछि सन् १९९४ मा पुनः पर्यटन वर्ष मनाउने निधो गर्याे।
पर्यटकको संख्या २ करोड ९७ लाख पुर्यायाे । सन् २००७ मा तेस्रो पर्यटन वर्ष मनाउँदै मलेसियाले पर्यटनबाट ८० खर्ब मलेसियन रिंगेट आर्जन गरेको पाइन्छ । मलेसियाले सन् २०१३–१४ मा आफ्नो पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि भीएमवाईलाई दाेहाेर्यायाे ।
पर्यटन उद्योगलाई दिगो र फलदायी बनाउनेतर्पm दक्षिण एसियाका देशहरूले अवलम्बन गरेका बजारीकरणका प्रयासहरूको यी उपलब्धिका केही नमुना हुन् । भारतले पनि अविश्वसनीय भारत (अमेजिङ इन्डिया) को ब्रान्डसहित पर्यटन प्रवद्र्धनका अभियानहरूलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ । स्मरणीय छ, सन् २०१७ लाई एसोसिएसन अफ साउथ–इस्ट एसियन नेसन्स (आसियान) मुलुकका सम्पूर्ण राष्ट्रिय पर्यटन संस्थाहरूले संयुक्त कार्यक्रम बनाई पर्यटन प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् ।
भिजिट नेपाल–१९९८ पछि सन् २००८ मा पर्यटक आगमन संख्या १० लाख पु¥याउने लक्ष्यसहित नेपाल सरकारले सन् २०११ लाई भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने निर्णय गर्याे । अन्य उद्देश्यहरूमा नेपाललाई एउटा अनुपम होलिडे गन्तव्य बनाउने, पर्यटन पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने, सेवाप्रदायकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लैजाने पर्यटकको आवश्यकता पूरा गर्न स्थानीय स्तरमै सामुदायिक क्षमता बढाउने र अन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिने आदि रहेका थिए ।
राष्ट्रपतिद्वारा उद्घाटित भ्रमण वर्ष अत्यन्तै भव्य रूपमा मनाइयो । पर्यटक आगमनमा लक्ष्यअनुसारको वृद्धि हुन नसके पनि झन्डै साढे ७ लाख पर्यटकले त्यस वर्ष नेपाल भ्रमण गरे । यो संख्या सामान्य भए पनि यसलाई सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ ।
यो वर्ष हाम्रो घुमफिर वर्ष (२०१७) हो भने यसभन्दा अघि पनि हामीले सन् २००२–०३ लाई नेपाल गन्तव्य अभियानका रूपमा मनायौं । सन् २००७ लाई पोखरा भ्रमण वर्ष र अहिलेकै वर्ष नेपाल–युरोप भ्रमण वर्ष घोषित छ । हवाई सेवालगायत अन्य समुचित पूर्वाधार विकासबिना पर्यटन प्रवद्र्धनका हाम्रा प्रयासहरूले कम माने राख्छन् ।
सन् २०१८ सँघारमा आइपुग्दासम्म पूर्वघोषित नेपाल भ्रमण वर्ष (दुई) को तयारीका लागि कुनै उल्लेख्य काम नभएका कारण सरकारले सन् २०२० मा १५ लाख पर्यटक भिœयाउने गरी नेपाल भ्रमण वर्ष (दुई) मनाउने भएको छ । कुनै पूर्वतयारीबिना यस प्रकारको अभियान थालिनुभन्दा समय सारिएको ठीकै हो । तर, हालका पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको स्थितिमा केही सुधार भएको छैन ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था जटिल छ । मुस्किलले नौवटा ठूला जहाजको ‘बे’ (पार्किङ स्थल) उपलब्ध हुन सक्ने स्थिति छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गका र अन्य राजमार्गहरूको स्तरोन्नति भएको छैन । सरकारले भ्रमण वर्ष (दोस्रो) का लागि कुनै स्पष्ट योजना तयार गरिसकेको छैन । निजी क्षेत्रसँग हातेमालेका लागि कुनै परामर्श छैन । नीति–नियमहरूको पुनरावलोकन भएको छैन ।
सरकारका प्राथमिकता के हुन्, पर्यटनसँग आबद्ध संघ–संस्थाहरू अन्योलमा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालबारे यथेष्ट सूचना प्रवाह गर्ने नाममा नेपाल पर्यटन बोर्डले अर्थहीन प्रवद्र्धन भ्रमण र सेल्स मिसनको आयोजनामा अपारदर्शी रूपले समय र धन खर्चेको छ । भारत र चीनमा पर्यटन प्रवद्र्धन अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । आर्थिक कूटनीतिले व्यापारलाई घाटातर्पm मात्र डो-याएको छ भने पर्यटनतर्पm राष्ट्रिय ध्वजावाहकको सीमित क्षमताले गर्दा के गर्नेबारे राजदूतहरू केही सोच्न सकिरहेका छैनन् ।
दुई महिनाअघि पाकिस्तानस्थित नेपाली राजदूतावासले नेपालको पर्यटन तथा व्यापार वृद्धि गर्न लाहोरमा नेपाल एक्जिविसन गर्न चाह्यो, तर हवाई सम्पर्कको अभाव र पाकिस्तानको आन्तरिक अवस्थाले गर्दा त्यो योजनाले मूर्त रूप लिन सकेन । त्यस्तै, युरोपका अनेकन् मुलुकमा नेपालको बजार राम्रो रहेको बाबजुद पनि नेपाल वायुसेवाले आफ्नो हवाई सम्पर्क स्थापित गर्न नसकेका कारण युरोपेली पर्यटकहरू सोचेको संख्यामा नेपाल भ्रमणमा आउन सकेका छैनन् ।
स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकार धमाधम गठन हुने प्रक्रियामा छन् । ती सबै सरकारले आफ्नो राजस्वको स्रोत पनि पहिलाएर अगाडि बढ्नु छ । स्थानीय तहका केही सरकारले त राजस्व निर्धारण पनि गरिसकेका छन् । पर्यटन क्षेत्रमा लगाइने करको भार अभैm कति बोझिलो हुने हो, व्यवसायीहरू चिन्तित देखिन्छन् ।
सरकार लगानी बिना उत्पादकत्व वृद्धि भएको हेर्न चाहन्छ । नेपाल भ्रमण वर्ष (दोस्रो) ले आशा जगाएको छ । सातवटै प्रदेशका सचेत बासिन्दाहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न योजनाहरू बनाई रहेको समाचार हामी सुनिरहेको छौं ।
त्यो एउटा अन्यन्तै सकारात्मक लक्षण हो । जनताको उत्साहजनक सहभागितामा स्थानीय सांस्कृतिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक र अन्य मानवीय सम्पदाहरूको संवद्र्धन र प्रवद्र्धन भइरहेको देख्दा–सुन्दा कुन पर्यटनप्रेमीको मन आल्हादित नहोला र ?
उद्योग पर्यटन दक्षिण–पूर्वी एसिया टुरिस्ट अर्गनाइजेसन